Filtrer les éléments par date : jeudi, 27 décembre 2018
jeudi, 27 décembre 2018 20:52
Toamasina: Lasa Toby « Jeneraly Randrianazary » ny tobin'ny fari-piadidian'ny Zandarimariam-pirenena eo Analakininina
Toby "Pointe Tanio" no anarany teo aloha. Tonga teto Toamasina ny praiminisitra Ntsay Christian fa tsy namonjy ny lanonana namoahan'ny CENI voka-pifidianana vonjimaika.
Niatrika ny fotoana ny fianakavin'i jeneraly Randrianazary izay notarihan'ny vady navelany.
Noho ity jeneraly ity isan'ireo Sekreteram-panjakana avy eto anivon'ny faritan'i Toamasina voalohany nihazona izany no nahatonga ny fanjakana nanaiky izao fanovana ny Tobin'ny fari-piadidian'ny Zandary Toamasina nampitondraina ny anarany izao tamin'ny faneken'ny fianakaviany.
jeudi, 27 décembre 2018 18:20
Média: Le Directeur de Publication du journal Le Citoyen convoqué
Média: Le Directeur de Publication du journal Le Citoyen convoqué par la Police demain 28 décembre 2018
jeudi, 27 décembre 2018 16:47
CENI: Résultats provisoires élections présidentielles 2è tour
Inscrit: 9 913 599
jeudi, 27 décembre 2018 16:46
CENI: Tsy tonga niatrika ny fanambarana vonjy maika ny vokam-pifidianana ny Kandida Marc Ravalomanana